Vazhinji vashandisi havazodi kuwana kana kushandura Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) marongero pane maPC avo. Izvo zvakati, kana iwe uchida kuwana uye kuchinja UEFI firmware marongero, kune dzakawanda nzira dzekuita kupinda EFA firmware marongero paPC anomhanya Windows 10.
Kana uripo Windows 10, unogona kushandisa chero api zvawo akapihwa pazasi nzira kuwana UEFI firmware marongero.
Cherechedza 1: Haasi maPC ese kunze uko anotsigira UEFI. Saka, kana PC yako isingatsigire UEFI, unogona kunge usingaone sarudzo yekuvhura UEFI firmware marongero.
Cherechedza 2: Kana usati waisa Windows 10 yet or Windows 10 haisi kukwirisa kumusoro, tevera madhairekisheni muWebhu 3 yegwaro.
Pinda EFA firmware marongero kuburikidza Zvirongwa
Step 1: Vhura purogiramu yeMapirogiramu. Enda kune Kwidziridzo & Chengetedzo > Peji yekudzoreredza.
Step 2: Mu Kutanga kutangira chikamu, chengetedza Tangazve zvino bhatani. Ndapota chengetedza basa rako usati wadzvanya Bhatisa izvozvi bhatani.
Step 3: PC yako inotangazve, uye iwe uchawana zvinotevera Sarudzai nezvechisarudzo screen. Dzvanya pane iyo Troubleshoot sarudzo.
Step 4: PaTransleshoot skrini, panya Zvinyorwa zvitsvaga.
Step 5: Iwe zvino uchawana iyo Yakanakisa sarudzo skrini neasarudzo dzakawanda. Pano, tinya UEFI Firmware marongero kuita.
Cherechedza kuti Windows 10 haizoratidzi iyo UEFI Firmware marongero sarudzo kana PC yako isingatsigire.
Step 6: Pakupedzisira, chengetedza Dzorerazve bhatani rekuti utangezve PC yako uye uvhure UEFI firmware marongero.
Vhura EFA Firmware Zvirongwa kubva kuKutanga / kukiya
Step 1: Paunenge uri kukiya yekuvhara kana Start screen, bata pasi kusuduruka kiyi wobva wadzvanya pane Dzorerazve kuita.
Step 2: PC yako ichagadzirisa uye kuratidza iyo Sarudza sarudzo sarudzo. Enda ku disposal > Zvinyorwa zvitsvaga, chengeta UEFI Firmware Settings uye ipapo chengetedza Dzorerazve bhatani reboot yako PC uye kuvhura UEFI Firmware Zvirongwa.
Vhura EFA Firmware Zvirongwa kana Windows 10 haizo bhodhi kana kuisirwa
Step 1: Vhura PC uye dzvanya mugadziri akatsanangurwa kiyi kuti uwane iyo UEFI marongero. Vagadziri vazhinji vanotaura iyo UEFI kana BIOS kiyi pane skrini (neiyo OEM logo) iyo inoratidza kumusoro mushure mekuvhura PC. F1, F2, Esc, F11, F12, uye Delete ndizvo zvinowanzoitwa makiyi.
Vhura UEFI firmware marongero uchishandisa Command Prompt
Step 1: Chengetedza basa rako rose. Vhara zvese zvirongwa zvinomhanya.
Step 2: Vhura Command Prompt semutungamiriri. Kuti uite izvozvo, taura CMD mu Start / taskbar yekutsvaga shamba, kurudyi on Command Enter prompt and click Mhanya semutungamiri kuita.
Baya Ehe bhatani kana iwe ukatora Quick User Control.
Step 3: Pahwindo ra Command Prompt, nyora rairo inotevera wobva wadzvanya pinda kiyi yekutanga yako PC uye vhura iyo UEFI Firmware Zvirongwa.
Our kuvhura nzira dzekutanga dzekutangisa mukati Windows 10 mutungamiri anogona kukufarirawo.
Dual Booting Ubuntu Na Windows 10 Pro Ine BitLocker Encryption